ပို့ စ်တောင် မတင်တတ်တော့ဘူး ..😅
ဗိုက်တလုံးနဲ့ မွေးခါနီးလူကို ဘေဘေ က BPP-Challenge လုပ်ထားတာမို့လက်ရှိ အခြေ အနေကို ထင်ဟပ်စေမယ့် ပုံလေးပဲ တင်ထားပေးလိုက်ပါတယ် .. ဘာလီသွားတုံးက ရိုက်ခဲ့တဲ့ မီးတောင်ပုံလေ .. ဗိုက်က နေ့ မွေးမလား ညမွေးမလား အခြေအနေမို့ ပါ ဟိဟိ .. ပရဟိတ လုပ်ငန်းများကိုလည်း လှူ ဒန်းနေပါတယ်လို့..
Labels: About me, Tag post7comments | Links to this post
ဖူးခက် ( ၇ )
ဖူးခက်မှာ နောက်ဆုံးတည်း ဖြစ်တာကတော့ Bang Tao မှာပါ။ လူရှင်း ၊ နားအေးပါးအေး ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း တည်းချင်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Private Villa ပါ ။ လုံးချင်းအိမ်မျိုးလေးတွေ အလုံး ၂၀ လောက် ရှိပါတယ် ။ လပေးငှားတာက တဖက် ၊ ရက်နဲ့ တည်းချင်သူတွေ အတွက်က တဖက်လုပ်ထားပါတယ်။
အဝင်ကနေ ရိုက်ထားတာပါ ၂ ထပ်အိမ်လေးပါပဲ ၊ ရေကူးကန်က အကျယ်ကြီးပါ
ဧည့်ခန်းပါ ဘေးနားက အောက်ထပ်က အိပ်ခန်း။
ကျနော်တို့ က ၂ယောက်ထဲမို့ပိုတဲ့အခန်းတွေကို ပိတ်ထားပါတယ် ၊ မိသားစုများရင် (သို့ ) သူငယ်ချင်းတွေ စုလာကြရင် တအိမ်လုံးဈေးနဲ့ အိပ်ခန်း ၃ခန်းလုံးငှားရင်လည်း တန်ပါတယ်။
မီးဖိုခန်းမှာ မီးဖို ပစ္စည်း အကုန် အစုံထားပေးထားပါတယ်အရက်မျိုးစုံ သောက်တဲ့ဖန်ခွက်တွေလည်းရှိပါတယ်
ကိုယ့်ဘာသာချက်စားလို့ လည်းရပါတယ် ဒယ်အိုးကအစ ဓါးအဆုံးအကုန်ထည့်ပေးထားပါတယ်
ရေကူးကန်က ခြံအစ အဆုံးနီးပါးရှည်ပါတယ်
အိပ်ခန်းက ရိုးရိုးလေးပါ အပိုဆာဒါးသိပ်မပါပါဘူး
လာတည်းတဲ့ ဧည့်သည်တွေ အတွက်ပေးတဲ့အိတ်ကလေးပါ
အခန်းသော့ ၊ အိမ်သော့ ၊ ခြံတခါးသော့ အကုန်ပါပါတယ် ပန်းရောင်လေးကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းပါ
နံပါတ် ၁ နဲ့၂ ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့front desk 1 and2ကို ဆက်လို့ ရပါတယ်။ ဖူးခက် တမြို့ လုံးဘယ်သွားသွား ယူသွားပြီး ဆက်လို့ ရပါတယ် ။တခြားကိုလည်းခေါ်လို့ ရပါသေးတယ်။
မနက်စာကို ဘယ်အချိန်နဲ့ဘာစားမယ်ဆိုတာလည်းmenu ကိုကြည့်ပြီး ကြိုမှာထားခဲ့ ရပါတယ်။
စားမယ့် အချိန်ရဲ့နာရီဝက်ကြိုလာပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ကျွေးတာပါ။
ကျနော်က မနက် ၈ နာရီ မှာထားတော့ ၈ နာရီ အတိမှာ ဒီလို အသင့်ပြင်ပြီးသားပါ
စားသောက်ပြီးထားခဲ့ရင် house keeping ဝင်တော့ အကုန်ရှင်းသွားပေးပါတယ်။
မနက်စာစားပြီးတော့ ဟိုတယ်က ကားနဲ့ လိုက်ဖို့ ပြင်ကြပါတယ် ၊ သူတို့ က surin beach ၊ bang tao beach နဲ့ Tesco lotus စသဖြင့် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နေရာကို ပို့ ပေးပါတယ် ၁နာရီခွဲ လောက်ကြာရင် ပြန်လာကြိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ က Surin beach ကိုသွားကြပါတယ်။ ကားက ကျနော်တို့ ကို ချပေးခဲ့ပြီး နောက် ၁နာရီခွဲလောက် အကြာမှာ လာကြိုမယ်လို့ မှာသွားပါတယ်။
Surin beach ပါ
ကျနော်တို့ ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်နေရင်း အရှေ့ က အဖြူမကြီးတွေက ယိုးဒယားစစ်သားတယောက်နဲ့ စကားပြောနေတာတွေ့ ပါတယ်။
ကျနော်တို့အနားသွားတော့ အဲဒီ စစ်သားက ပြုံးပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်က သွားမေးပါတယ် ဘာဖြစ်လို့ လည်း ငါတို့ ဟိုဖက်လမ်းလျှောက်ခြင်လို့ မရဘူးလား ဆိုတော့ သူက ပြောပါတယ်
သူက လုံခြုံရေးအထူးတပ်ကဖြစ်ကြောင်း ၊ ယိုးဒယားဘုရင်ရဲ့ တူမတော် လာလည်မှာမို့ လုံခြုံရေးယူနေတာဖြစ်ကြောင်း နောက်နာရီဝက်ဆို ကမ်းခြေကို ပိတ်ထားတော့မှာမို့အခု မိနစ် ၂၀ လောက်တော့ လျှောက်လို့ရသေးကြောင်းပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ က ငါတို့ ဟိုတယ်က ၁နာရီခွဲမှ လာခေါ်မှာ ၊ ဒီနားမှာ နေလို့ မရရင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ သူကဟိုတယ်ကို ဖုန်းဆက်ပေးပါ သူပြောပါ့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်က ဟိုတယ်က ပေးလိုက်တဲ့ ဖုန်းနဲ့ ခေါ်ပီး နင်တို့ စစ်သားက ပြောနေတယ် ပြောလိုက်အုံးဆို ပေးလိုက်ပါတယ်။ စစ်သားက ကျနော်တို့ ကို ပြောတာ လည်း အင်္ဂလိပ်လိုချောနေတာပါပဲ။ ဟိုတယ်က ကောင်မလေးနဲ့ ကြတော့ ယိုးဒယားလိုပြောပါတယ် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပါပဲ ။ ထိုင်းလို ကျနော်နားမလည်ပေမယ့် သူလေယူလေသိမ်းမှာ မောက်မာတာ တစက်မှ မပါပါဘူး။ ဒါတောင် လုံခြုံရေးအထူးတပ်ကပါ ။ အလကားနေရင်းမောက်မာနေတဲ့ ကျနော်တို့ပြည်ကြီးက တချို့ သော စစ်သားများကို သတိရစေပါတယ်။
သူတို့ အထူးတပ်ဖွဲ့ ဆို တဲ့ကားကြီးကို ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ခြင်ပေမယ့် အဲနားမှာ လူတွေရှိနေလို့ မရိုက်ခဲ့ရပါဘူး။
လုံခြုံရေးတပ်တွေ မိုင်းရှာနေတာပါ။ စစ်သားက ကျနော်တို့ ဟိုတယ်ကို အခြေအနေ ပြောလိုက်တာမို့ဟိုတယ်က နောက် ၁၀မိနစ် ဆို ကျနော်တို့ ကို လာခေါ်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တကယ်လည်း ၁၀မိနစ် အတွင်း ကားရောက်လာပါတယ် ။ ကျနော်တို့ လည်း စစ်သားကို နုတ်ဆက်ပြီး Tesco lotus shopping mall ကို ပို့ ပေးဖို့ ပြောပြီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
Tesco lotus ကနေဈေးဝယ် မုန့် စားပြီး ညနေဟိုတယ်ကို စောစော ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်နေ့ အတွက်လျှောက်သွားဖို့ဟိုတယ်ကနေ ဆိုင်ကယ် ငှားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်သုံးသလောက် ဓါတ်ဆီထည့်ပြီး တနေလုံးနေမှ ဘတ် ၃၀၀ ပါ အရမ်းတန်ပါတယ်။
Tesco ကဝယ်လာတဲ့ ယိုးဒယားကန်စွန်းရွက်ကြော် အထုပ်ပါ
ဖူးခက်မှာ မြန်မာ့ရုပ်သံလိုင်းမိပါတယ် ..
ပဲငပိကန်းစွန်းရွက် အစပ်ပါ .. ညနေကြတော့ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကြော်စားလိုက်ပါတယ်
နောက်နေ့ ကျတော့ ငှားထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့Bangtao beach ကိုသွားပါတယ်။ Beach မရောက်ခင် မြို့ ထဲကို လည်းပတ်သွားကြည့်ကြပါသေးတယ် ။ ဖူးခက်မှာ သေချာတာတခုက ဆိုင်ကယ်စီးသူတွေကိုကြည့်လို့ ဦးထုပ်ဆောင်းထားရင် အရှေ့ တိုင်းသားရုပ်ဖြစ်ဦးတော့ tourist ပါ ။ local တွေက လုံးဝ မဆောင်းကြပါဘူး ။အောက်ပုံကလိုမျိုး ကနေရာတိုင်းမှာတွေ့ နိုင်တာပါ။
အောက်ကပုံတွေကတော့ Bang Tao ကမ်းခြေ မှာ ရိုက်ထားခဲ့တဲ့ ပုံတွေပါ..
ကလေး တတောင့်တမိုက်ကို ရေပြနေတာ
အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးဘူး ဖွားဖွား အမိုက်စား
တကောင်တည်း ဒါပေမယ့် လင်းယုန်
နေဘယ်လောက် ပူပူ ဒင်းတို့ က မမှု
သူ့ ကိုကြည့်ပြီး ပူလိုက်တာဆိုတာ ဒူးလေးထောက်လို့ လှေထိုးသားသေလို့ ဝင်စားသလားမသိ :P
ယနေ့ မှစ နှစ် ၁၀၀ တိုင်ကွယ် ..
နှစ် ၁၀၀ နားနီပြီ :)
ညနေရောက်တော့ ဟိုတယ်ပြန် ဆိုင်ကယ်အပ် ပြီး လေဆိပ်ဆင်းခဲ့ကြပါတယ် ..
Labels: About me, Miscellaneous, Travel6comments | Links to this post
ဖူးခက် ( ၆ )
Phi Phi tour က ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အမြန်ရေချိုးကြပါတယ် Phuket Simon Cabaret ရှိုးကြည့်ဖို့ ကားက လာခေါ်တော့မှာကိုး ပွဲက ၇း၄၅ မှာ စမှာဆိုတော့ ၇ နာရီမှာ လာခေါ်ပါတယ်။ တခြား ဟိုတယ်ကလူတွေလည်းကားပေါ် ပါလာပါတယ် ။ ဒါဟာ ဖူးခက်မှာ နာမည်အတော်ကြီးတဲ့ ပွဲဆိုတာ သိသာပါတယ် ပွဲပြတဲ့ ရုံကိုရောက်တော့ လူတွေ ဆိုတာမှ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာပါ။ တယောက်တယောက် အတွက်ရမယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ တွက်ရင် မနည်းပါဘူး။
ပွဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး ဖုန်းတွေလည်း အသံပိတ်ထားပါ ၊ ကင်မရာတွေ မရိုက်ရပါ စသည်ဖြင့် လက်မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ ရုံထဲဝင်ဖို့ တန်းစီနေတုန်း တီဗွီမှာ ပြနေတာပါ။ ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဟဲ့ လို့တွေးထားသမျှ အဝမှာတင် သဲရေကျ ဖြစ်ရပါတယ်။ အထဲကိုဝင်ပြီး ထိုင်တော့လည်း ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို မရိုက်ကြဖို့fine ကောက်ခံရမယ့် အကြောင်းသတိပေးစာ တင်ထားပါတယ်။ ကျနော့်လို ပဲ အုန်းသီးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ရိုက်လိုက်မဟဲ့လို့ မှန်းထားသူတွေ အကုန် ကင်မရာလေးတွေပိတ်ထားကြရပါတယ်။
လက်မှတ်ကိုကြည့်ကတည်းက ကိုကိုက VIP seat မှာမှ နံပါတ်အသေး ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ ရှေ့ ဆုံးကြီးထင်တယ် စိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာလုပ်နေပါတယ်။
ကျနော်က သဘောကျပါတယ် ရှေ့ ဆုံးဆိုတော့ ကောင်းကောင်းမြင်ရတာပေါ့လို့ ။ ကိုကို က သူတို့ ဆင်းလာပြီး ဟိုဆွဲဒီဆွဲလုပ်ရင် ဘယ်ကောင်းမလဲဆိုပြီး ညစ်နေတာပါ ။
အထဲဝင်ကြတော့ တကယ့်ကို ရှေ့ဆုံးမှာပါ။ ကျနော်က စိတ်ပုတ်ပါတယ်၊ဘယ်အရာမှ မကြောက်တဲ့ ကိုကိုတယောက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာ မြင်ရလို့ သဘောကျနေတာပါ။
သူတို့ ကတကယ်လည်း ပွဲထဲမှာဆင်းလာပါတယ် ။ ယောကျာ်းလေးတယောက် ၂ ယောက်ကို အာဘွားတွေပေး ၊ရင်ဘတ်ကြီးထဲ ဆွဲထည့် ၊ စင်ပေါ်ခေါ်သွားလုပ်ကြပါတယ်။ လုပ်တာကလည်း အချောအလှ လေးတွေက လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး ပထမဆုံး ပွဲအစမှာ ထွက်လာတဲ့ ဝတုတ်တုတ် အခြောက်လူပျက်မကြီးက လုပ်တာပါ ၊ အတော်ရီရပါတယ်။ အာဘွားပေးခံရတဲ့ တယောက်က ကျနော်တို့ ဘေးက ကိုရီးယားစုံတွဲက ယောကျာ်းပါ။ အဲဒီဝတုတ်ကြီးက စင်ပေါ်ကဆင်းလာပြီး ကျနော်တို့ နားမှာဝဲနေရင်း အဲဒီယောကျာ်းကိုရွေးလိုက်တာပါ ကိုကိုက မျက်နှာကျောတင်းနေလို့ ကျော်သွားတယ် ထင်ပါတယ် ။ သူ့ မိန်းမက ကလေးပိစိနဲ့၊ သူ့ ယောကျာ်းကို အခြောက်မဝတုတ်ကြီးက အာဘွားပေးတော့အော်အော် ရီတာ လက်ထဲ ချီထားတဲ့ ကလေးပြုတ်ကျ မတတ်ပါပဲ။ ကိုကိုကတော့ မရီနိုင်ပါဘူး ဟိုတယောက်ပြီးရင် ၊ သူ့ ဘက်လှည့်လာမှာ စိုးလို့ ပါ။ ကိုရီးယားကောင်ကလည်း ရီသာနေတယ် မျက်နှာ တခုလုံး နီတွတ်နေပါတယ်။ရုံတခုလုံးက လူတွေ အကုန်ပွဲကျနေတာပါ။ ဟိုမိန်းမကြီး သီချင်းဆိုရင်း တခြား အဖြူ တကောင်ဆီ သွားတော့မှ မိန်းမလုပ်သူက သူ့ ယောကျာ်းပါးက နုတ်ခမ်းနီတွေကို တစ်ရှုးနဲ့ ရေဆွတ် သုတ်ပေးရတာ ၊ ပါးမှာ အကွက်လိုက်ပါ။ ဝတုတ်ကြီးက အဖြုတကောင်ကို သူ့ ရင်ပတ်ကြီးအတုအကြီးကြီးထဲ ဆွဲသွင်းတာပါ ၊ဟိုကလည်း မျက်နှာကြီးသာ တွတ်တွတ်ရဲနေတာ လုပ်သမျှ ခံနေရတာပါပဲ ။ ဘေးနားက သူ့ ကောင်မလေးကလည်း ရီတာ သေမတတ်ပါဘဲ။ နောက်တော့ သူ့ အလှည်ြ့ပီးသွားပြီး တခြား အလှလေးတွေ ကပြပါတယ် ။
ပွဲကအတော် ခမ်းနားပါတယ် အသံစနစ်ကလည်း ကောင်း မီးစနစ်ကလည်း ကောင်းပါတယ်။သူတို့ ဆီကို လာလည်တဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများက ရိုးရာဝတ်စုံတွေ နဲ့သီချင်းတွေ( တရုတ်၊ အိန္ဒယ၊ အီဂျစ် ၊ ကိုရီးယား ၊ ဂျပန် ၊ရုရှ ) နဲ့ နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ ကပြတင်ဆက်ပါတယ်။ ပွဲထဲက ဟာကိုတော့ အင်တာနက်ကရှာတွေ့ တဲ့ပုံတွေ ပဲ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဒီဝတုတ်ကြီးပါ ၊ ပွဲမှာ ဂျိုကာ သဘောပေါ့။ သူ့ ရင်ဘတ် အတုကြီးကလည်း မနည်းမနော အကြီးကြီးပါ။အလှလေးတွေ ဖျော်ဖြေပြီး ကြားထဲမှာ Halftime သဘောမျိုးသူက ထပ်ထွက်လာပါတယ်။ ကိုကိုကတော့ လာပြန်ပြီဆို စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ ဝတုတ်ကြီးက ထပ်ဆင်းလာပြန်ပါတယ် နောက် ပရိတ်သတ်တွေ အလည်ခေါင်က အဖြူတကောင်ကို ဆွဲခေါ်သွားပါတယ် ၊ စင်ပေါ်မှာ သူနဲ့ ကခိုင်းတာပါ။ ဒီအဖြူကတော့ မရှက်ပါဘူး ၊ ခေသူမဟုတ်ပါ ၊ စင်ပေါ်မှာ ဝတုတ်နဲ့ အပြီဒွန့် နေအောင် ကပါတယ် ဝတုတ်ကိုလည်း ကစ်စ်တွေပေးပါသေးတယ်။
ပွဲအပြီးမှ မှ သူတို့ တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ခွင့် ပေးပါတယ်။တွဲရိုက်ရင် မုန့် ဖိုးသဘောပိုက်ဆံပေးရပါတယ်။ တွဲမရိုက်ခြင်ရင်လည်း ဒီအတိုင်းရိုက်လို့ ရပါတယ်။ ကိုကိုက နင်ရိုက်ချင်ရိုက်ပေးမယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်က တွဲရိုက်ရင် တခြားလူတွေရိုက်တဲ့ အထဲလည်း ပါသွားမှာ စိုးလို့ မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။
ကလေးတွေက အရမ်းကို တွဲရိုက်ခြင်ကြပါတယ်
အလယ်ခေါင်က တွဲရိုက်တဲ့ မိန်းမအစစ်ကြီးထက် သူတို့ က အဆပေါင်းများစွာလှပါတယ်
သူတို့ ထဲကတချို့ တွေက အပြင်မှာကြတော့ ယောကျာ်းမိန်းကလေးမှန်းသိသာပေမယ့် ၊ တချို့ အလှလေးတွေဟာ မိန်းကလေး အစစ်နဲ့ မခြားအောင်လှပါတယ် ။မိန်းကလေး အစစ်တောင် သူတို့ လောက်မလှပါဘူး ။ ခြေတံလက်တံတွေကအစ ပျော့ပျောင်း အိစက်နေတာပါ။ အကုန်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားကြတာလား ၊နဂိုကသေးသေးလေးတွေလား တော့မသိပါဘူး ။ ကျနော်သဘောကျတဲ့ အလှလေးတွေကို ပွဲအပြီးမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်ကို ဟေးယူ ဆို ပြီး သူနဲ့ တွဲရိုက်ဖို့ လက်ကွေးခေါ်နေတာပါ ၊ ဒီတယောက်က အလှဆုံးထဲမှာပါပါတယ်။ မိန်းကလေးအစစ်ဖြစ်ပြီး သူ့ လောက်မှ မလှလို့ ကွကိုယ်တောင် စိတ်ညစ်မိပါရဲ့ ။
ဒီတယောက်ကလည်း တကယ် မိန်းကလေး အစစ်နဲ့ တူတာပါ
မချော ၂ယောက် ကိုယ်တယောက်ပုံ ဟိဟိ
ပို့ စ်ပေးနေတာပါ ... မိန်းမ မစစ်ဘူးလို့ ဘယ်လိုမှ ထင်စရာမရှိပါဘူး..
Simon Cabaret ရှိုးပြီးတော့ လာ ကြိုတဲ့ ကားကို မလိုက်တော့ ဘူး လို့ သွားပြောပြီး ၂ ယောက်သား ၊ patong night life ကို လေ့လာဖို့ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ တနေ့ လုံး ဖွင့်ထားတဲ့ လမ်းမကြီး တခုလုံး ဟာညဖက်မှာတော့ ဘာကားမှ သွားမရအောင် ပိတ်ထားလိုက်တာပါ။ တလမ်းလုံး လူတွေ လူတွေ အပြည့်ပါပဲ။ နိုက်ကလပ်တွေ ၊ ဘားတွေ ၊ တိုင်ပတ်အက ဘားတွေ ၊ ဟိုဒင်း ဒီဒင်းတွေ အစုံပါ။ တိုးရစ်စ်တွေကလည်း ယောကျာ်း မိန်းမ လမ်းပေါ်မှာအပြည့်ပါ ။ ကျနော်က တိုင်ပတ်တွေ ကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေလို့ကိုကိုက အတင်းဆွဲခေါ်တာနဲ့ သေချာမရိုက်ဖြစ်ပါဘူး။ ဘာလို့ ဆိုတော့ ဘားတခုရှေ့ ရပ်လိုက်တာနဲ့အောက်မှာ လူခေါ်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေက လှမ်းလာကြလို့ ပါ။ တချို့ လည်း အထဲဝင်ဖို့ခေါ်ပါတယ်။ဘိုမ တိုင်ပတ်တွေလည်းတွေ ခဲ့ပါတယ် ။ ဘိုမတွေက ဓါတ်ပုံ မရိုက်ပါနဲ့ စာတမ်း ထောင်တားတာမို့ မရိုက်ခဲ့ပါဘူး။
တိုင်ပတ် မမ များ
နာမည်ကြီး Seafood ဆိုင်ပါ မြင်တာနဲ့ စိတ်ကုန်လို့ မစားဖြစ်ပါဘူး ၊
ပြင်ဆင်ထားတာ သူများတွေအတွက်တော့ သွားရည်ကျချင်စရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမယ့် ကျနော့်စိတ်ထဲတော့ စိတ်ပျက်စရာကြီးပါ
ညဖက်မှာ နေ့ ခင်းက ဖွင့်ထားတဲ့ လမ်းမကြီးကို ပိတ်ပစ်လိုက်တာပါ
ကျနော်တို့ က တော့ ဒီ night life ကို မပျော်မွေ့ ပါဘူး ၊ တကယ့်ကို လူတွေ ရှုပ် အ၇က်တွေ ဆေးလိပ်တွေ မိန်းမတွေနဲ့စိတ်ညစ်ရာကြီးပါ ။
ကြုံဖူးတယ်ရှိအောင် လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးပြန်ခဲ့ကြပါတယ် ။
တခု ထူးခြားတာ ဖူးခက်မှာ ရုရှလို ဘားတွေ ဆိုင်တွေ အများကြီးပါ ။ ရုရှ တိုးရစ်စ်တွေ ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ဝင်တိုက်မတတ်ပေါပါတယ်။
ဆိုင်တချို့ ဆို လုံးဝ ဆိုင်းဘုတ်က အစ ရုရှလို ပဲ ရေးထားတာပါ။ လှည့်ပတ် သွားရင်း Jungceylon ပြန်ရောက်လာတော့ ညစာကို အဲဒီက ထိုင်းဆိုင်မှာ ပဲ စားပါတယ် ၊နောက် ဟိုတယ်က လာခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံးကားနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ် ။ မနက်ဖြန်ကျ Ban Tao က ဟိုတယ်ကို ပြောင်းကြမှာကိုး။
Labels: About me, Miscellaneous, Travel2comments | Links to this post
Editingawebapp or site’s HTTP headers with Lambda@Edge and CloudFront
Meeting Duane Again - Last week, I have met my photography idol Duane Michals for 2nd time in my life. And, I gotachance to haveaconversation with him. I asked him to write...